600 War Deg Deg Ah:-Dagaal Ka Dhacay Tukaraq. | khaatumo news online
War Deg Deg Ah:-Dagaal Ka Dhacay Tukaraq.
Sep 14, 2020 - 20 Aragtiyood
Wararka ka imanaya Degaanka Tukaraq ayaa ku warramaya in xalay halkaasi uu ka dhacay Dagaal u dhexeeya Ciidamada Somaliland iyo Jabhadda Dib u xoraynta SSC oo uu hoggaamiyo Col. Faysal Falaalug.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii dabley hubaysan oo ka tirsan Jabhadda ay weerar xooggan ku qaadeen saldhig ay Ciidamada Somaliland ku leeyihiin Tukaraq.
Somaliland iyo Jabhadda SSC ayaan midkoodna weli ka hadlin Dagaalkaas waxaana adag in xog sugan laga helo Khasaaraha rasmiga ah ee kala gaaray labada dhinac.
Jabhadda Dib u xoraynta SSC ee uu hoggaamiyo Col. Faysal Falaalug oo ku sugan Gobolka Sool ayaa inta badan weeraro gaadmo ah la beegsata Ciidamada Somaliland.
Hoose Ku Qor Fikradada ( 20)
Kornayl Faisal Falaalug xabadda markaad iidoor kala daashaan foorariya weliba makhaaniida
Faaysal waa guulaysanayaa waayo halganku meel uun ayuu ka bilaabmaa kuwo xun xun ee reerka ahna kow baan ka doonaynaa yaan la difaacin adeeraday baan ka bilaabayaa ee qof walba oo caqli lahoow ha difaacin horgale waa raga halkaa maatadeenii dhigay iyo hadaanba lahayn wanaag ileen iminka waxba maahine.
falaalug aduu kuwasayaa iyo waxii snm iyo calool unoosha ah
indho fiishta halagu leefo
waxay iidoorku kufaanayaan dhulbahantaha ay iska horaysiiyaan ,majoogi lahaydeen halkaa hadii kuwa idiin adeega idinku bilaabaan oo la idiin midoobo mar hore ayaa lagu kalabixi lahaa guduneey imaad goyseenhadaan barkay kugu jirin
maxey been buun buuniyaan qoladan majeerten ee khatumones leh sool cidmada uga badan ilaa saraakisha waa dhulbahntey maxaa la xoreynaa kolkaa mida kele wiilakan aad ku shegtaan faaag ma filysaa in cidmada somalialand u burburin karo mayaa wa la dhawryaa lakin waa in talo ka qaadaa somaliland shaqsigaa iyo 10 qof u wato oo addunak tidhaa drone ku idlaa waa argaxiso inaa baa ku filan ee waay u naxayaan why addunak ma rabo wax rabshadeeya somalilnad cid kastow tahey qabil kastow tahey kuwa daga iyo kuwaan daginba why addunaka konfur buu ku wareerey taag uma hayao waooyi gubanaayaa
dhulbahante ninkaa kornayl falaalug taageero buuxda halala gaaro
Faaysal waa geesi tol waayey aadna waan u taageeraa dhan walba isaga iyo inta danta guud u dhimanaya waana is aragnay geesigaa mujaahidka ah. Xaqiiqda jirta ee aan la iska indho tiri karin ayaa ah jamhad aan weliba reerku ku midaaysnayn maamul cashuur iyo dhaqaalo aduunka ka qaata lama diriri karto, hadii ay dadkeenu labada darafood kala raacsanayn oo aaynu midaysanahay saacad naguma qaadateen.
Anigu waxaan qabaa maamulkii Puntland ee dhulka laga qabsaday aan ku taageerno xoraynta dhulka ka dib haba la tashadee. Waayo xaqiiqda ha iska indho tirina maamulka SNM oo horgalayaal inaga ah wata inagoo SSC oo qudha kuma aadno.
Haawd ina adeer magaca nimankaa Hargeysa ugu yeedha IIDOOR anagu si wanaagsan ayeynu ugaaracnaa waad ogtahey dhulkoodii iyo geeloodiiba waan ka qaadney. Kubilaaba xabada wacade waynu idiin hiilin. Nijaasada IIDOOR ugu yeedha.
Kan Faysal fooxleh ayaa la yidhaa. Waligiiba hadhkiisa ayuu la dagaalamijiray. Meel uu ciidanka Qaranka iskaga hor yimaadeen maba jirto.
hadhkiisa ayuu ka cararaa
War ilayn ibtilo qolkan iyo khamiriyo cabiinti somali diidka ahaa hadana yuhuuda sheegtay maxaa kakahaysta ina falaalug maa mujaahid lacagtii abid ugubadnaydna hadaanu usoo diraynaa isaaq badan markii xabada iyo mukhaadaraadka isugu darsamaan dayeysan waa la,arki doonaa
Ma sanqadh samee oo caymadii baa mise waxa jira awood ay jabhaddu meel ku qabsatay oo la sheego. Ilaa aan maqlo Faysl Faalig baa meel saacado galay oo dagaalamaya, waxaan u arkaa makhaaniid askarta ciidanka qaranka Somaliland hurdada uun ka xumaynisa,kkkk
Hassan Aw Aden Buraale says:
Wakhtigii SNM- dagaalamaysey waxay la haayeen saxaafad u gaara oo ay waxay doonaan ku soo bandhigaan (run iyo been-ba) khatumo iyo Jabhadooda u ogolaada in ay Run iyo been ba soo qoraan.
Sidii niman dawlad la dagaalamaya, jabhad ku lahaa
Axmed warya says:
waa argagaxisadii al shabaab iho daacishtii tuulada buuhoodle ku dhuumaaleysta. waa in ciidamada qaranka weeraraan tuulada buuhoodle .ee argagixisada ku ababulayaan argagxisanimimada.
BEENAALAYAAL KU WAALATAY SOMALILAND REPUBLIC CAR CADDAYN KEENA
Waar dadka beenta ka daaya ma xishoode yaalyahow falaalug hooyadiin wasye